Ii-Waves-Jamaican Getaway & ADA - I-Airbnb
Ii-Waves-Jamaican Getaway & ADA
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSusan
Isiqwenga separadesi, Amaza anikezela ngekhaya elikhulu, elikwizinga eliphezulu, nezandi ezipholileyo zamaza, iziqwenga, iintaka kunye nokubona izityalo zetropiki, ulwandle kunye nokutshona kwelanga . Unekhitshi lale mihla, elinento yonke/igumbi lokutyela, iTV neWiFi, imidlalo, izinto zobugcisa, iibhayisekile, amanzi ashushu okuhlamba impahla kunye noA/C kuwo onke amagumbi okulala. Kufuphi nezinto ezonwabisayo, iivenkile zokutyela ezicetyiswayo ezinokutya okumnandi kwaseJamaica kunye neevenkile ezikufutshane. (Umpheki kunye/okanye isikhokelo sokukhenketha esongezelelweyo, siyafumaneka xa ucelile.).
Le ndlu inamagumbi aliqela nesandul 'ukulungiswa inamagumbi aphumela ngaphandle kunye neveranda yabucala kwigumbi lokulala ngalinye elinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu. Indlu ihlala ipholile ngeefestile zefrench, iifeni zesilingi kunye nesilingi ephezulu. Iindawo ezininzi zangaphandle zikhona ukuze uphumle, udlale, uqubhe, ubukele imvula uze umamele iintaka. Isitulo esinamavili siyafikeleleka kwigumbi lokulala nelokuhlambela xa sifunwa.
Ibhedi enkulu eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
Ngaphantsi kweyure enye uhamba ngemoto
Amanzi akuyo yonke indawo!! ICEBISO lokupakisha: Pakisha iimpahla ezimbalwa nezinye izinto zokuqubha, izinto zokogquma, izixhobo zokuntywila, ukutyibiliza emanzini, izihlangu zamanzi kunye nee-umbrella. Iivesti zobomi ezisemgangathweni kunye neetawuli zaselwandle ziyafumaneka kwindawo yakho. ICEBISO #2 Yiza neendleko ezincinci ($ 5s kunye ne $ 10s) ukuze ucebise ngezikhokelo zakho.
Ezi ziindawo ezinamanzi onokufikelela kuzo ngaphantsi kweyure xa uhamba ngemoto:
I-YS Falls yindawo enomtsalane kwindalo eneengxangxasi ezintle namachibi kunye nezinto ezonwabisayo ezijikelezwe ziigadi ezintle nemithi emihle. Banezikhumbuzo kunye nengqokelela emangalisayo yeencwadi kwivenkile yezipho. Yiza nemali, oomatshini babo be-ATM badla ngokulahlekelwa ngumqondiso: i- $ 20 umntu ngamnye ukuze angene ize ibe yi- $ 20 eyongezelelekileyo kwi-zip-line. Phinda ujonge iwebhusayithi yabo ukuze ubone amaxabiso ahlaziyiweyo.
yePevaila Ibhari yePevaila ifikelelwa ngesikhephe kwaye yakhiwe kwibhari yesanti ephangaleleyo kuyo yonke indawo kumatye eekhorali ezivumela ukuhamba lula kwamanzi kunye neendawo zokuntywila. Qaphela! Ubuhle bamatye ekorali bunobungozi obuthile; ungayikrweli ikorali okanye uchukumise ii-urchins zaselwandle. Cela isikhokelo sakho ukuba sibachaze!
I-Crocodile River Cruise
Qalisa umlambo omnyama, umlambo omkhulu waseJamaica onokuhambahamba kuwo uze udlule kweyona ndawo inkulu yaseJamaica ukuze ubone iingwenya zisondela ibe zinobuqu.
IBlue Fields Beach
Bluefields Beach Park yindawo ethandwayo yoluntu kwimizuzu elishumi elinesihlanu xa uhamba ngemoto ukusuka endlwini. Inee-shower kunye namagumbi okutshintsha ngemali encinci kunye nabathengisi abathengisa ukutya, imisebenzi yobugcisa eyenziwe ngezandla kunye nezinye izinto ezaziwa nguJamaica.
Umntu okhathalelayo uhlala kufutshane ibe yena nompheki bayafumaneka xa becelwa.